Umshini we-cartoning umshini osebenza kahle kakhulu nekhwalithi. Ukusetshenziswa okungajwayelekile, ukwehluleka ukugcina ngesikhathi, njll. Konke kuyizimbangela noma ukuthonya umshini we-cartoning awukwazi ukusebenza ngokujwayelekile. Ukuze ukwazi ukusebenzisa umshini we-cartoning ngokuqinile isikhathi eside ...
Ezinye izinkinga ezikhona embonini yemishini yokupakisha umshini we-cartoning yami kufanele ixazululwe ngokushesha okukhulu. Ukuze uhambisane nezinga eliphakeme lomhlaba ngokushesha okukhulu, kusenobuchwepheshe obuningi umshini wezwe lami we-carton ...
1. Umshini wokupakisha othomathikhi futhi we-cartoning unciphisa izindleko zabasebenzi futhi ugcina isivinini, ukunemba nokuqina. 2. Ukwenza ngcono ukukhiqizwa kwabasebenzi. Ijubane lomshini we-cartoning othomathikhi lishesha kakhulu kunalelo lokupakisha ngesandla. 3. Uma ukupakisha ngesandla kusebenza ...